Morontsiraka Crystal Bay eo amin'ny Nusa Penida. Bali " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Morontsiraka Crystal Bay eo amin'ny Nusa Penida. Bali
Morontsiraka Crystal Bay eo amin'ny Nusa Penida. Bali
Fijery ankapobeny ny morontsiraka Crystal Bay
Topimaso momba ny Beach Crystal Bay ao amin'ny nusa Penida Island
Ny morontsiraka Crystal Bay dia any atsimo andrefan'ny nosy Nusa Penida, Bali. Ny anaran'ity helodrano ity sy ny morontsiraka eo amorony dia avy amin'ny zava-misy fa misy rano madio foana. Mazava izany.
Ny moron'ny morontsiraka dia rakotra fasika fotsy, na dia indraindray aza ny onja misondrotra miaraka amin'ny onja dia mitondra fasika basalt mainty, izay mifangaro amin'ny fotsy mba hahazoana izay hitanao amin'ny sary etsy ambany. Ny hazo rofia dia maniry eo amoron'ny morontsiraka. Sahabo ho 1 km ny morontsiraka. Voahodidin'ny havoana maitso izy io, ary ny fidirana amin'ny seranana dia misaraka amin'ny ranomasina amin'ny alàlan'ny nosy kely fotôgôtika izay misy ny tempoly. Manome alokaloka ampy ny famafazana rofia lava. Ny ravin'izy ireo, mihantona, dia mahatratra saika ny rano. Ny hantsana mideza dia miakatra mahitsy avy amin'ny fasika sy rano.
Izy io koa dia toerana tsara hijerena ny masoandro mody.
Filentehan'ny masoandro tao amin'ny Crystal Bay Beach
Diving ao amin'ny Crystal Bay
Crystal Bay dia iray amin'ireo toerana fitsidihana malaza indrindra. Ny vanim-potoana tsara indrindra ho an'ity hetsika ity dia manomboka amin'ny volana Jona ary mifarana amin'ny Oktobra.... Nandritra io vanim-potoana io, dia mpizahatany maro no misitrika any an-dranomasina, manantena ny hahita ny "hazandran'ny masoandro". Misy onja mahery, matetika midina any akaikin'ny moron-dranomasina, izay mampidi-doza tokoa. Ny fankalazana eto dia tsy azo ekena raha tsy misy fiofanana manokana na torolàlana matihanina. Tokony hotadidina izany, amin'ny fandinihana tsara ny fepetra takian'ny fiarovana.
Eo amoron-dranomasina, misy kafe kely mivarotra zava-pisotro mangatsiaka sy tsakitsaky isan-karazany. Misy trano fisakafoanana ihany koa, izay manolotra sakafo sy alikaola feno, ary koa toeram-pialofana ho an'ny andrana mipetraka eo amoron-dranomasina. Misy koa ny fivarotana fanofana ho an'ny snorkelling fitaovana.
Noho ny hatsaran-tarehiny rehetra, ny Crystal Bay Beach dia tsy dia mety loatra amin'ny filomanosana. Eo amin'ny farany ambany dia misy vatohara maty marobe. Ny taolany dia mety mamely ny tongotra mandritra ny vanim-potoana misy onja na onja haingana, koa ny fandehanana eny ambany dia tokony hitandrina tsara.
Ny morontsiraka dia mifangaro fasika fotsy sy mainty basalt. Ny vatohara maty dia tsy fahita firy
Fiantsenana bisikileta - maimaim-poana
Hofan-trano fialofana amin'ny masoandro - 50 000 ropia
Crystal Bay Beach dia eo amin'ny helodrano amoron-tsiraka andrefan'ny nosy Nusa Penida... Ity no morontsiraka voalohany mahatalanjona atsimon'ny toerana misy ny sambo sy ny sambo ao Nusa Penida matetika.
adiresy: Sakti, Nusapenida, Kabupaten Klungkung, Bali 80771, Indonezia
mandrindra: -8.715756, 115.459067
Tora-pasika Crystal Bay amin'ny sari-tanin'i Bali
Tora-pasika Crystal Bay amin'ny sarintany nosy Penusa nosy. Bali
Tora-pasika Crystal Bay eo amin'ny sari-tanin'ny Nusa Penida. Bali
Sarin'ny morontsiraka Crystal Bay
Fotodrafitrasa amin'ny Crystal Bay Beach
Matetika be olona ny morontsiraka Crystal Bay
Nosy misy tempoly manoloana ny morontsiraka Crystal Bay
Nosy kely tazana avy eny amoron-dranomasina
Filentehan'ny masoandro avy any amin'ny Crystal Bay Beach